खुल्लामन्च: एउटा बिरामीको बिछोड प्रेम कथा :
Great feelings! Very emotional and touching!
सुन्दर प्रस्तुति गोकुल भाइ!
एउटा कुरा भन्दिहालौं है, बीचमा आएपछि अलिक हतार-हतार कुदेजस्तो लाग्छ लेखाई। हतारमा कुद्दा अष्पष्टता थपिने त छँदैछ, भाषामाथि पनि अलि-अलि अन्याय हुन पुग्छ।
I really enjoyed to read, Great story, keep blogging, Thank you.
माथी वसन्तजीले भननु भएजस्तै मलाई पनि यो कथाक्रमको 'क्रमभंग' भएको जस्तो लाग्यो।
धेरै कुरा एउटै पोष्टमा अटाउन खोज्नु भएको हो वा लामो कुरलाई 'जिप' गरेर कम्प्रेस गर्न खोजेर यस्तो भएको हो !।
साँच्चै त्यो अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्ने कारण त्यहि एक 'प्याला'ले मात्रै भा' हो त ?
प्रस्तुती रोचक छ, बरु टुक्रा- टुक्रा गरेर राख्‍नु भएको भए अली लामै भए पनि पढ्दा तपाईको रफ्तार भेट्न हामीले पनि कुद्‍नु पर्दैनथ्यो !:)
'कम से कम एउटा छोराको नाम आफ्नो जस्तो जुराउनु' पर्ने ईच्छाको पछाडि कुनै रहश्य त छैनन होला नी ! (ठट्टा मात्रै गरेको है !)
म मेरो करणले कसैले दु:ख नपाउन भन्ने मनसिकताले सार्है ग्रसित भए । यस्तो अबस्थामा पनि सम्यमंता राख्न सक्नु पात्रको राम्रो पक्षहो। राम्रो लाग्यो। रमाइलो लाग्यो मलाई कथा। कस्तो भएछ है।
त्यसो त जुनबेला देखि बाटाहरु छुत्तिन्छन, र बाडीन्छ्न मनहरू -अरु कसैका भएर, कथाको अन्त्य त्यही घडी हुनु पर्ने होइन र? सपना र आकांक्षाहरुको समाप्ति त्यही बेला नै हुनु पर्ने हैन र? तर त्यसो हुदैन मान्छेरूपी प्राणी भित्र त्यों स्मृति नामक कहिले नामेटिने डिस्क छ, जसले गरि रहन्छ त्यों समयको पुनरावृत्ति र दुखाई रहन्छ मन ! तैपनी सबै पीडा लुकाएर, नितान्त व्यक्तिगत अनूभूतिहरुलाई तपाइले यहाँ सहज रुपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ र बाड़नु भएको छ त्यों सकारात्मक पक्ष हो !
सुजन शर्माजी, बसन्त दाजु, बि जे डुम्मालिजी, दिलिपजी, दुर्जेयजी अनी कृष्णपक्षजी । तपाईंहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद । कथा पढिदिनुभएकोमा र अमुल्य सुझाब राखिदिनुभएकोमा । बसन्त दाई र दिलिप सरले भन्नुभएजसै कथा छिटो दगुरेको सहि हो । टुक्रा-टुक्रा गरेर क्रमश: लेख्दै जाने धोको थियो । हतारमा सबैथोक समेट्न खोजेकाले अली अस्पस्ट भयो । खैर, केही छैन । जो भयो, गयो । यहाँहरुको सुझाबलाई हृदयङ्गम गर्दै अगाडि बढ्ने कोशीश गर्ने छु । धन्यवाद !
ढिलै भएपनि गोकुल जी को मार्मिक लेख पढे राम्रो अनि मिठो लाग्यो ।जिन्दगिनै जोडिने र टुटने हरुको यात्रा रहेछ । आखिर जो जस्तो अवस्थामा भएपनि कामना सफलताको नै भन्नु सिवाए अरु कुनै उपाए नहुने रहेछ ।
ashok nepal said...
गोकुल जी को लेख पढे राम्रो अनि मिठो लाग्यो सबैको जिंदगी माँ यस्ता घटना हरु हुन्चन तर पनी तपाईको लेख रार्मो लगेयो .....
NEW NEWS EVENT said...
I like this articles thank you very much.we want more and more like others articles. lalit kunwar palpali
तपाईंलाई ऋण चाहिन्छ?
के तपाईं आर्थिक संकटमा हुनुहुन्छ वा पैसाको खाँचोमा आफ्नै व्यापार सुरु गर्न? के तपाईं एक ऋण तिर्न वा बिल भुक्तान गर्न वा राम्रो व्यवसाय सुरु गर्न एक ऋण चाहिन्छ? तपाईंसँग कम क्रेडिट मूल्याङ्कन छ, र तपाइँसँग समस्या छ भने स्थानीय बैंक र अन्य वित्तीय संस्थानहरूबाट ऋण प्राप्त गर्ने? यहाँ हाम्रो संगठनबाट ऋण प्राप्त गर्ने तपाईंको मौका छ। हामी निम्नलिखित प्रयोजनों र अधिक धेरै व्यक्तिहरूको लागि ऋण प्रस्ताव गर्छौं। व्यक्तिगत ऋण, व्यापार विस्तार, व्यापार सुरुवात, शिक्षा, ऋण समेकन, कडा पैसा। हामी 3% को कम ब्याज दर संग ऋण को पेशकश गर्छन। ई-मेलद्वारा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्: fredmorefinance@gmail.com
व्हाट्साप: + 919654763221